Qaado tuubada, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Masaalka caanka ah ee Ciise: Laba qof ayaa taga macbudka si ay u tukadaan. Mid Farrisi buu yahay, kan kalena cashuurqaade (Luukos 18,9.14). Maanta, laba kun oo sano ka dib markii Ciise masaalkan yidhi, waxaa suuragal ah inaan isku dayno inaan si miyir qabno u dhahno oo aan nidhaahno, "Runtii, Farrisiintu waa sumcad-wanaagga iyo munaafaqnimada!" Hagaag ... laakiin aan u dhigno qiimeyntan oo aan isku dayno inaan qiyaasino sida masaalku u saameeyay dhagaystayaasha Ciise. Marka hore, Farrisiintu ma ahayn munaafiqiinadii waaweynaa, annagoo ah Masiixiyiin leh 2000 sano oo taariikhda kaniisadda ah, ayaan jecel nahay inay u qaataan. Saas ma aha, Farrisiintu waxay ahaayeen cibaado leh, cibaado badan, diin yari ah oo yahuuda ah kuwaas oo si geesinimo leh uga soo horjeeday sii kordhaya ee libinta, isku tanaasulka iyo isku xirnaanta dunida Roomaanka iyo dhaqankeeda Griiga. Waxay ugu yeereen dadka inay ku soo noqdaan sharciga oo ay naftooda u huraan inay si adag u aaminaan addeecidda.
Markii Farrisiintu tukanaayo masaalkan: "Waad ku mahadsan tahay, Ilaah aniga oo aan la mid ahayn dadka kale", maahan isku hallayn, ma ahan kaftan madhan. Waxay ahayd run. Ixtiraamka uu u lahaa sharciga ahaa mid aan eed lahayn; asaga iyo Farrisiinta laga tirada badan yahay waxay ballanqaadeen inay u hogaansan yihiin sharciga adduunka halkaasoo sharcigu si dhakhso ah u luminayo muhiimadda. Isagu uma eka sida dadka kale, oo isagu naftiisuu iskugu halleeyaa isaga - laakiin Ilaah bay ugu mahadsan tahay sidaas.
Dhanka kale, saraakiisha kastamada, canshuur aruurinta Falastiin, waxay lahaayeen sumcadda ugu xun ee suurtagalka ah - waxay ahayd Yuhuuddii cashuurta ka soo uruurisay dadkoodii ay u haysteen awoodda Roomanka oo inta badan naftooda ku hidaan hab dhaqan aan wanaagsaneyn (Fiiri Matayos 5,46). Qaybinta kaalimaha ayaa isla markiiba u cadaatay dhagaystayaasha Ciise: Farrisiinta, ninka Ilaah, inuu yahay "wanaagsan" iyo cashuurqaade, archetypal villain, sida "xun".
Sida had iyo jeer, si kastaba ha noqotee, Ciise wuxuu masaalkiisa siinayaa oraah lama filaan ah: waxaan nahay ama waxaan ku jirno wax saameyn ah ama taban ah kuma yeelan Ilaah; wuu cafiyaa qof kasta, xitaa dambiilaha ugu xun. Waxa kaliya oo aan sameyno waa inaan aamino isaga. Waana sida naxdin leh: qof kasta oo rumaysta inuu ka xaq badan yahay kuwa kale (xitaa haddii uu caddeyn adag u haysto) weli wuxuu ku jiraa dembiyadiisa, ma aha maxaa yeelay Ilaah ma cafiyin, laakiin wuxuu heli doonaa wuxuu u maleeyo inuu u baahan yahay.
Warka wanaagsan ee dambiilayaasha: injiilka waxaa loogu talagalay denbiilayaasha, ee ma aha kuwa xaqa ah. Kuwa xaqa ahi ma fahmaan nuxurka dhabta ah ee injiilka sababta oo ah waxay dareemayaan in nooca injiilka noocan ahi aanu muhiim ahayn. Kuwa xaqa ah, injiilku wuxuu umuuqdaa inuu yahay warka wanaagsan ee ah inuu Ilaah garab taagan yahay. Aaminkiisa Ilaah waa mid weyn maxaa yeelay wuxuu ogyahay inuu ku nool yahay cabsi ka badan dembiilayaasha cad ee adduunka ku xeeran. Isaga oo afkiisa af leh, wuxuu ku cambaareeyaa dembiyada xunxun ee dadka kale wuxuuna ku faraxsan yahay inuu u dhowaado Ilaah oo uusan u noolaan sidii dhillayaasha, gacankudhiiglayaasha iyo tuugada uu ku arko jidka iyo wararka. Kuwa xaqa ah, injiilku wuxuu dhabar jab ku yahay dambiilayaasha dunida, waano qaan ah oo ku tusaysa inuu dembiilaha joojiyo inuu dembaabo oo uu ku noolaado sida isaguba kan xaqa ah u noolaado.
Laakiin taasi maahan injiilka. Injiilku wuxuu war wanaagsan u yahay dambiilayaasha. Waxay sharraxaysaa in Ilaah mar hore cafiyey dembiyadooda oo uu iyaga nolol cusub ku siiyay Ciise Masiix. Waa farriin ka dhigaysa dambiilayaasha inay ka daaleen dulmiga naxariis darrada ah ee dembiga. Waxaa loola jeedaa in Ilaaha ah Ilaaha xaqnimada oo ay u maleeyeen inuu iyaga ka gees ahaa (maxaa yeelay isagu wuxuu leeyahay sabab kasta oo uu u noqdo), runti wuu ku jiraa iyaga xitaa wuu jecel yahay iyaga. Waxay ka dhigan tahay in Ilaah iyaga aan u yeeleynin dembiyada iyaga, laakiin in dembiyadu ay hore uugu abaal-mariyeen Ciise Masiix, oo dambiilayaashuba ay hore uga xoreeyeen dambiyadii dembiga. Waxay macnaheedu tahay inaysan ahayn inay ku noolaadaan cabsi, shaki iyo dhibaatooyin hal maalin. Waxay ka dhigan tahay inay ku aamini karaan Ilaah xagga Ciise Masiix inay u ahaadaan wixii uu ballanqaaday - dambi dhaaf, badbaadiye, badbaadiye, u doode, ilaaliye, saaxiib.
In ka badan diinta
Ciise Masiix kaliya maahan qof diinta ku dhex jira qaar badan. Isagu ma ahan buluug-indho-jilicsan oo sharaf leh, laakiin ugu dambeyntiina fikradaha aan caadiga ahayn ee awoodda naxariista aadanaha. Isagu sidoo kale ma ahan macalin akhlaaqda ka mid ah dad badan oo ugu yeeray dadka "inay ku dadaalaan", hagaajinta anshaxa iyo mas'uuliyad bulsho oo dheeri ah. Maya, markaan ka hadlayno Ciise Masiix, waxaan ka hadlaynaa isha weligeed ah ee wax walba (Cibraaniyada 1,2: 3), iyo wax ka badan intaas: Isaguna waa Bixiyaha, Bixiyaha, dib u heshiisiiyaha, kaas oo dhimashadiisa iyo sarakicistiisa uu kula heshiiyay guud ahaan cilmiga cilmiga ee Ilaah. (Kolosay 1,20). Ciise Masiix waa kan abuuray wax kasta oo jira, oo xambaaraya wax kasta oo jira daqiiqad kasta, oo qaatay dembiyada oo dhan si uu u soo furto wax kasta oo jira - adiga iyo adigaba. Wuxuu u yimid inuu inaga mid noqdo si uu nooga dhigo wixii uu ina abuuray inaan noqonno.
Ciise ma ahan qof diinta ku dhex jira oo keliya, iyo injiilku ma ahan oo keliya kitaab muqadas ah oo badan. Injiilku ma ahan sharci cusub oo horumarsan, qaaciddada iyo aruurinta hagitaan ee raba inuu si habsami leh nooga caawiyo jawi xanaaq badan, xanaaq badan; waa dhamaadka diinta. "Diin" waa war xun: waxay noo sheegaysaa in ilaahyada (ama Ilaah) wuu inagu xanaaqay oo nafsaddeenna uun ha ku qanciyo x-laab-dheellitiran u hoggaansan xeerarka ka dibna dib noogu dhoola caddeeya. Laakiin injiilku maahan "diin": waa war Ilaahay u gaar ah aadanaha u gaar ah aadanaha. Waxay sheegaysaa dembiyada oo dhan la dhaafay iyo nin kasta, naag kasta iyo ilmo saaxiibkiis ah oo Ilaah. Waxay siisaa dalab aad u weyn oo aan shuruud lahayn oo dib-u-heshiisiin ah, shuruud la'aan shuruud u leh qof kasta oo caqli ku filan inuu rumeeyo oo aqbalo (1 Yooxanaa 2,2).
"Laakiin nolosha kuma jiraan wax bilaash ah," ayaa aad tiraahdaa. Xaaladdan oo kale waxaa jira wax bilaash ah. Waa hadiyadaha ugu weyn oo dhammaan loo malayn karo waxayna leedahay nolol weligeed ah. Si loo helo, hal shay ayaa loo baahan yahay: in la aamino bixiyaha.
Ilaah wuu neceb yahay dembiga - annaguna nama aha
Ilaah wuxuu neceb yahay dambiga sabab uun keliya - maxaa yeelay waxay na baabi'isaa annaga iyo wax kasta oo nagu xeeran. Bal eeg, Ilaah nama baabbi'in doono, maxaa yeelay, dembilayaashu waa dembi; Wuxuu damacsan yahay inuu inaga badbaadiyo dembiga ina baabi'iya. Waxa ugu fiicanna waa - isagu waa uu horay u sameeyay. Horay buu ugu qabtay Ciise Masiix.
Dembigu waa shar maxaa yeelay waxay naga goysaa Ilaahay. Waxay ku keentaa dadka inay Ilaahay ka cabsadaan. Waxay naga horjoogsataa inaan aragtida dhabta ah sida ay tahay. Waxay sumeeysaa farxaddeena, waxay kor u qaadeysaa mudnaanahayaga, waxayna u bedeshaa xasillooni, nabad, iyo qanacsanaanta jahwareer, cabsi, iyo cabsi. Waxay naga dhigaysaa rajo la’aan nolosha, waliba iyo gaar ahaan marka aan runtii gaarno oo aan helno waxaan rabno iyo waxaan ubaahan nahay. Ilaah wuu neceb yahay dambiga maxaa yeelay isagaa ina baabi'iya, laakiin isagu isagu na necbaado. Wuu ina jecel yahay. Taasi waa sababta uu u sameeyay wax ka dhan ah dembiga. Wixii uu sameeyey: wuu u dhaafay - oo wuxuu qaatay dembiyadii dunida (Yooxanaa 1,29) - oo wuxuu ku sameeyey Ciise Masiix (1 Timoteyos 2,6). Xaaladdayada dembiilayaal ma aha in Ilaah na tusayo garabka qabow, sida had iyo jeer la baray; Natiijadu waxay tahay in innaga oo ah dembiilayaal, aan ka tagnay Ilaah, aan iska fogeynay isaga. Laakiin isaga la'aantiis annagu waxba ma nihin - jirkeenna oo dhan, wax walba oo innaga qeexaya isaga ayaa isaga ku tiirsan. Haddaba dembigu wuxuu u shaqeeyaa sidii seef laba af leh, oo dhinacyadu, waxay nagu qasbeysaa inaan dhabarka u jeedinno Ilaah cabsida iyo kalsoonida, oo aan diidno jacaylkiisa; Dhanka kale, waxay naga dhigaysaa gaajaysan jacayl dhab ah. (Waalidiinta qaangaarka ah ayaa si gaar ah ugu fiicnaan doona fahmitaanka tan.)
Dembigu wuxuu ku soo furtay Masiixa
Malaha caruurnimadaada waxaa ku siiyay fikirka dadka waa weyn ee kugu xeeran in Ilaah, inuu yahay garsoore adag, inuu inaga sarreeyo, inuu si taxaddar leh u miisaamayo mid kasta iyo ficilladeena, diyaarna u yahay inuu na ciqaabo haddii aan wax walba boqolkiiba saxno, oo annaguna aannu taas samaynno Waa inaan awoodno inaan furi karno Albaabka Cirka. Injiilku wuxuu ina siinayaa war wanaagsan oo ah in Ilaah uusan ahayn garsoorayaal adag: waa inaan nafteena u hibeynaa muuqaalka ciise. Ciise - Baybalku wuxuu inoo sheegayaa - waa aragtida Ilaah ee kaamil ah indhiheenna aadanaha ("Sawirka dabeecaddiisa", Cibraaniyada 1,3). Isaga “Ilaah is-dejiye”, wuxuu noo yimid inuu midkeen ina tuso sida saxda ah ee uu yahay, sida uu u dhaqmo, cidda uu ku beero iyo sababta; Isaga waannu ku aqoonsan nahay Ilaah, isagu waa Ilaah, oo xaakinka gacmihiisa ayaa ku jiraan.
Haa, Eebbe wuxuu ka dhigay Ciise garsooraha adduunka oo dhan, laakiin isagu waa wax keliya oo xaakin ah. Wuxuu cafiyaa dambiilayaasha. isagu "wuu xukumaa", micnaheedu ma xukumayso iyada (Yooxanaa 3,17). Waxaa la ciqaabi doonaa oo keliya haddii ay diidaan inay cafis weydiistaan ​​isaga (Aayadda 18). Garsoorahaan wuxuu bixiyaa ciqaabta eedeysanaha jeebka uu ka bixiyo (1 Yooxanaa 2,1: 2), wuxuu caddeeyaa in qof walba dembigiisa weligiis dib loo celiyo weligiis (Kolosay 1,19, 20) ka dibna adduunka oo dhan ku casuumaa dabaaldega ugu weyn taariikhda adduunka. Waxaan hadda u fadhiisan karnaa oo aan uga doodi karnaa dhamaadka aaminsanaanta iyo gaalnimada iyo cidda ku jirta iyo cidda laga reebay nimcadiisa; ama annagana waan uga tagi karnaa isaga (waxay kujirtaa gacmo wanaagsan), wey fuulayaan oo iskudhafan karaan dabaaldeggiisa, oo waxay u fidin kartaa warka wanaagsan qof kasta oo jidka ag jooga oo u duceeya qof kasta oo jidkeena naga gudba.
Injiilka, warka wanaagsan, wuxuu inoo sheegayaa: Adigu waxaad horay ugu tihid Masiix - aqbal. Ku raaxayso. Aamin noloshaada ku aamin. Nabadiisa ku raaxayso. Indhahaagu ha u furnaadaan quruxda, jacaylka, nabadda, farxadda adduunka ee waxa arki kara oo keliya kuwa ku nasanaya jacaylka Masiixa. Masiixa dhexdeeda waxaan ku leenahay xorriyadda aan ka hor tagno oo aan ku qiranno dembigeenna. Sababtoo ah waxaan aaminsanahay, si cabsi la'aan ah ayaan u qiran karnaa dembiyadeenna waxaanna ku ridi karnaa garbihiisa. Isaga waa inoo garab taagan yahay.
Ciise wuxuu yidhi, Ii kaalaya, mid kasta oo hawllan oo culeys qabaa; Waxaan rabaa inaan ku qanco. Harqoodkayga dushooda ku qaata oo wax iga barta; maxaa yeelay, waan qalbi qaboobaa oo qalbi libaax; oo naftiinna nasashaad u heli doontaan. Maxaa yeelay, harqoodkaygu waa mid jilicsan, oo rarkayguna waa fudud yahay » (Matayos 11,28: 30).
Markaynu Masiixa ku nasanno, waxaynu ka joogsanaynaa inaan cabirno caddaaladda; hadda waxaan qiraynaa dembiyadeenna si qiiran oo daacadnimo ah isaga. Masaalkii Ciise ee Farrisiinta iyo cashuurqaadayaashii (Luukos 18,9-14) waa cashuur bixiye dembi leh oo si qumman u qirtay dembigiisa oo doonaya in nimcada Ilaah la caddeeyo. Farrisiga - oo xaqnimada bilowgiisa bilaabay, oo si rasmi ah u qoraya guushii quduuska ahayd ee uu qabay - indhuhuna ma aha dembigiisii ​​iyo baahidii degdegga ahayd ee uu u lahaa cafiska iyo naxariista, oo sidaas daraaddeed isagu gacantiisuu fidiyaa kumana helo xaqnimada xagga Ilaah ka timid (Rooma 1,17; 3,21; Filiboy 3,9). Noloshiisa "cibaada leh ee sharciga waafaqsan" waxay mugdi gelisaa aragtidiisa sida qotada dheer ee uu ugu baahan yahay nimcada Ilaah.
Qiimayn daacadnimo ah
Dhex dhexaadka dembiyadeena qotada dheer iyo cibaado la'aanta, Masiixu wuxuu noogu yimaadaa nimco (Rooma 5,6 iyo 8). Halkaan, cadaalad darradeenii ugu weyneyd, qorraxda caddaaladda, oo badbaadada baalasheeda hoostooda, noo soo kacday (Malaakii 3,20). Kaliya markaan aragno sida aan ugu jirno baahiheenna dhabta ah, sida korsaarka iyo cashuurqaadaha masaalnimada, oo keliya markay tukashadeena maalinlaha ahi noqon karto "Ilaah ha u naxariisto dambiilayaal", markaa markaa waxaan si qoto dheer u neefsan karnaa diirimaadka bogsashada Ciise.
Ma jiraan wax aan u caddaynayno xagga Eebbe. Isagu wuu inaga yaqaan si ka badan sidii aan naqaannay, wuuna yaqaan dembiyadeenna, wuuna ogyahay baahida aan u baahan nahay naxariis. Isagu mar hore ayuu wax walba inoo qabtay si loo hubiyo saaxiibtinimadeenna weligeed ah ee aan la lahaan doonno isaga. Waxaan ku nasan karnaa jacaylkiisa. Waxaan aamini karnaa eraygiisa cafiska. Khasab maahan inaan kaamil nahay; kaliya waa inaan rumeysanno isaga oo aan aaminno. Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan noqono saaxiibbadiis, ee ma ahan caruusadiisa ku shaqeysa elektiroonigga ah ama askartiisa tuugta ah. Wuxuu raadinayaa jacayl, uma hoggaansami karo meydadka iyo adkaysiga barnaamijka.
Rumeyso, ha shaqeynin
Xiriirrada wanaagsan waxay ku saleysan yihiin is aaminaad, isku xirnaan adkeysi leh, daacadnimo iyo waxwalba oo ku saabsan jacaylka. Adeecid daahir ah kuma filna aasaas (Rooma 3,28; 4,1-8). Addeeciddu booskeeda ayey leedahay, laakiin waa inaan ogaano inay ka mid tahay cawaaqibka ka dhalan kara xiriirka, ee aan ahayn sababihiisa. Haddii aad ku salaysid xiriirka aad la leedahay Ilaah kaliya addeecista, waxaad ku dhici kartaa isla weynaan isku mid ah sida kii Farrisiinta ahaa ee masaalka ama cabsida iyo jahwareerka, waxay kuxirantahay sida aad daacad u tahay marka aad akhrineyso heerkaaga kaamilnimada cabbirka kaamilnimada.
CS Lewis wuxuu wax ku qoraa heerka sare ee masiixiga isagoo sheegay inaysan jirin wax micno leh oo oran kara inaad qof aaminto ilaa aad adigu taladooda qaadato mooyee. Waxaad dhahdaa: Ciddii ku aaminta Masiixa iyaguna way dhegeysan doontaa taladiisa oo waxay fulin doontaa inta ugu wanaagsan oo dhan. Laakiin ku alla kii ku jira Masiixa, oo isaga isku halleeya, wuxuu sameyn doonaa intii karaankiisa ah isagoo aan ka cabsanayn in la diido haddii uu ku guul darreysto. Waxay igu dhacdaa annaga inta badan badanaa (Fashil, waxaan ula jeedaa).
Markaan ku nasanno Masiixa, dadaalkeena si aan uga gudubno caadooyinkayaga dambiga leh iyo dariiqooyinka fikirka ayaa noqoneysa fikir go'aan qaadasho leh, asal ahaan xaqiiqada ah in Eebbe isku halleeyo oo ina badbaadiyo. Isagu nooguma ridin dagaal aan waligiis dhammaanayn oo kaamil ah (Galatiya 2,16). Taa baddalkeeda, waxay nagu qaadaysaa xajka iimaanka halkaas oo aan ku baranayno inaan ka takhalusto silsiladaha addoonsiga iyo xanuunka kaas oo aan horay uga xoraynay. (Rooma 6,5-7). Uma liidno halgamaa Sisyphean ee kaamilnimada oo aannan ku guuleysan karin; Bedelkii waxaan helnay nimcada nolosha cusub oo Ruuxa Quduuska ahi ina barayo inaan ku raaxaysanno ninkan cusub, oo lagu abuuray xaqnimada oo lagu qariyey Masiixa Ilaah. (Efesos 4,24; Kolosay 3,2-3). Masiixu wuxuu horay u qabtay wixii ugu adkaa - inuu innaga dhinto; intee in ka badan ayuu qaban doonaa waxa fudud hadda - guriga noo keeno (Rooma 5,8: 10)?
Rumaysad, sida loogu sheegay Cibraaniyada 11,1, waa kalsoonida aan ku qabno waxaan rajeyneyno, kuwa Masiixu jecel yahay. Rumaysadku hadda waa muuqaalka keliya ee muuqda ee muuqda ee wanaagga uu Eebbe ballan qaaday - wanaaggaas oo wali laga qariyey shanta dareenkeenna. Si kale haddii loo dhigo, iyada oo indhaha iimaanka aan u aragno sidii ay horeba u jirtay, adduunka cusub ee cajiibka ah, oo codadku saaxiibtinimo yihiin, gacmuhu waa turxaan, taas oo ay ku badan tahay cunitaan iyo qofna shisheeye. Waxaan aragnaa wixii aan haysan caddayn la taaban karo oo la taaban karo oo loogu talagalay dunida sharka ah. Rumaysadku wuxuu ka dhashay Ruuxa Quduuska ah, kaas oo ina shubaya rajo badbaadada iyo madax furashada abuurkasta (Römer 8,2325), ist eine Gabe Gottes (Epheser 2,8-9), und in ihm sind wir gebettet in seinen Frieden, seine Ruhe und seine Freude durch die unbegreifliche Gewissheit seiner überströmenden Liebe.
Haben Sie den Sprung des Glaubens gewagt? In einer Kultur der Magengeschwüre und des hohen Blutdrucks drängt uns der Heilige Geist auf den Pfad der Gelassenheit und des Friedens in den Armen Jesu Christi. Mehr noch: In einer erschreckenden Welt voll Armut und Krankheit, Hunger, brutaler Ungerechtigkeit und Krieg ruft Gott uns auf (und ermöglicht es uns), unseren gläubigen Blick auf das Licht seines Wortes zu richten, welches das Ende des Schmerzes, der Tränen, der Tyrannei und des Todes und die Erschaffung einer neuen Welt, in der die Gerechtigkeit zu Hause ist, verheisst (2 Butros 3,13).
Waan aamini karnaa isaga. Waxaan culeyska saari karnaa garbaha - culeyskayada dembiga, culeyskayada cabsida, culeyskayaga xanuunka, niyad jab, jahwareer iyo shaki. Wuxuu iyaga u labisan doonaa qaabkii uu isagu noo kaxayn lahaa ka hor intaanannaan aqoonin iyaga.
waxaa qoray J. Michael Feazel